Izindaba - Amacala wobunjiniyela bemishini yokukhiqiza i-nitrogen nomoya-mpilo kwezinye izimboni
Amacala wobunjiniyela bemishini yokukhiqiza i-nitrogen ne-oxygen kwezinye izimboni
Umshini we-nitrogen, njengemishini yokuhlukanisa umoya, ungahlukanisa igesi ye-nitrogen ehlanzekile emoyeni.Ngenxa yokuthi i-nitrogen iyigesi engasebenzi, ivame ukusetshenziswa njengegesi evikelayo.I-nitrogen ingavimbela ngokuphumelelayo i-oxidation endaweni ehlanzekile ye-nitrogen.Izigaba ezilandelayo ze izimboni noma amasimu adinga noma asebenzise ukuqina kwawo kwamakhemikhali;
1. Imayini yamalahle nokugcinwa kwayo
Ezimayini zamalahle, inhlekelele enkulu ukuqhuma kwegesi exubile yangaphakathi lapho umlilo wenzeka endaweni ene-oxidized ye-goaf.Ukushaja i-nitrogen kungalawula okuqukethwe komoyampilo engxubeni yegesi engaphansi kuka-12%, engakwazi nje ukucindezela amathuba okuqhuma. , kodwa futhi kuvimbele ukuvutha kwamalahle okuzenzakalelayo, okwenza indawo yokusebenza iphephe.
2. Ukukhipha uwoyela negesi
I-nitrogen iyigesi ejwayelekile esetshenziselwa ukucindezela kabusha uwoyela negesi emikhakheni emikhulu ye-Wells/gas. Ukusebenzisa izici ze-nitrogen ukugcina umfutho we-reservoir, isigaba esixubile kanye nokugudluzwa kukawoyela okungahambi kahle kanye nobuchwepheshe bokudonsa amandla adonsela phansi kungathuthukisa kakhulu izinga lokutholwa kukawoyela, okuwu ukubaluleka okukhulu ukuzinzisa ukukhiqizwa kukawoyela nokwandisa ukukhiqizwa kukawoyela.
Ngokwezici zamagesi angenayo, i-nitrogen ingasungula umkhathi ongasebenzi ngesikhathi sokucubungula, ukugcinwa nokudluliselwa kwezinto ezivuthayo, iqede ukushintshwa kwamagesi anobuthi namagesi avuthayo.
4. Imboni yamakhemikhali
I-Nitrojeni iyimpahla ebalulekile yokwenziwa kwezintambo zokwenziwa (inayiloni, i-acrylic), izinsalela zokwenziwa, amarabha okwenziwa, njll. Ingase futhi isetshenziselwe ukwenza umanyolo onjenge-ammonium bicarbonate, i-ammonium chloride, njll.
Embonini yemithi, inqubo yokugcwalisa i-nitrogen ingathuthukisa ngokuphumelelayo ikhwalithi yezidakamizwa, kungakhathaliseki ukuthi i-infusion, umjovo wamanzi, umjovo we-powder, i-lyophilizer noma ukukhiqizwa koketshezi ngomlomo.
6. electronics, amandla, ikhebula
Isibani esigcwele i-nitrogen.Isibani sigcwaliswa nge-nitrogen ukuze kuvinjwe i-oxidation ye-tungsten filament futhi kwehlise izinga lokuhwamuka kwayo, ngaleyo ndlela andise impilo yebulb.
7. Amafutha adliwayo
I-oyela egcwele i-nitrogen iwukugcwalisa i-nitrogen ethangini futhi ikhiphe umoya ethangini ukuvimbela uwoyela ukuthi ungafakwa i-oxidized, ukuze kuqinisekiswe ukugcinwa okuphephile kukawoyela. Uma inani le-nitrogen liphezulu, liyancipha izinga lomoya-mpilo kangcono ukugcina.Kungashiwo ukuthi okuqukethwe kwe-nitrogen kunomthelela omkhulu ekugcinweni kwamafutha okupheka namafutha.
8. Ukudla neziphuzo
Okusanhlamvu, amathini, izithelo, iziphuzo, njll. kuvame ukupakishwa ku-nitrogen ukuvimbela ukugqwala ukuze kugcinwe kalula.
9.imboni yamakhemikhali epulasitiki
I-nitrogen yethulwa ekubumbeni nasekupholiseni izingxenye zepulasitiki.I-nitrogen isetshenziselwa ukunciphisa ukuguqulwa okubangelwa ukucindezela ezingxenyeni zepulasitiki, okuholela ekuzinzeni, ubukhulu obunembile bezingxenye zepulasitiki.Umjovo we-Nitrogen ungathuthukisa ikhwalithi yemikhiqizo yomjovo kanye nokuguquguquka kokuklama.Ngokwezimo zezinqubo ezahlukene, ukuhlanzeka kwe-nitrogen edingwa umjovo wepulasitiki. ukubumba kuhlukile.Ngakho-ke, akufanelekile ukusebenzisa i-nitrogen yebhodlela, futhi kungcono ukusebenzisa umshini we-pressure swing we-adsorption nitrogen osendaweni ukuze unikeze i-nitrogen ngokuqondile.
10. irabha, ukukhiqizwa kwe-resin
Inqubo ye-rubber nitrogen vulcanization, okungukuthi, lapho kwenziwa i-vulcanization yenjoloba, i-nitrogen yengezwa njengegesi evikelayo.
12. ukukhiqizwa kwamasondo emoto
Ukugcwalisa isondo nge-nitrogen kungathuthukisa ukuzinza nokunethezeka kwesondo, futhi kungavimbela ukubhoboza nokunweba ukuphila kwesondo.I-conductivity yomsindo we-Nitrogen inganciphisa umsindo wesondo futhi ithuthukise ukunethezeka kokugibela.
13. Metallurgy kanye nokwelashwa ukushisa
Ukusakaza okuqhubekayo, ukugingqika, igesi yokuvikela insimbi yokuvikela i-annealing;Ingaphezulu naphansi kwesiguquli kuhambisana nokuvala i-nitrogen ephephezelayo yokwenza insimbi, ukuvalwa kwesiguquli sokwenza insimbi, ukuvalwa kwendawo engaphezulu yesithando somlilo, kanye negesi. ngomjovo wamalahle okhihliziwe wokwenza insimbi yesithando somlilo.
14. Izinto ezintsha
Ukuvikelwa komkhathi wokwelashwa kokushisa kwezinto ezintsha nezinto eziyinhlanganisela.
I-nitrogen yegesi yezinga lokushisa evamile isetshenziselwa ukuvikela izindiza, irokhethi nezinye izingxenye ezingaqhumi, i-rocket fuel supercharger, ukwethulwa kwegesi yokubuyisela esikhundleni sephedi kanye negesi yokuvikela ukuphepha, igesi yokulawula umkhumbi-mkhathi, igumbi lokulingisa emkhathini, igesi yokuhlanza ipayipi likaphethiloli lendiza, njll.
16. Amandla kagesi
Isibonelo, i-nitrogen iyadingeka ukwenza i-ethanol ngommbila.
17. ukugcinwa kwezithelo nemifino
Ngokwezentengiselwano, indawo yokugcina umoya yezithelo nemifino ibitholakala emhlabeni wonke iminyaka engaphezu kwengama-70. I-nitrogen iyindawo ethuthuke kakhulu yokugcina izithelo nemifino.Izithelo nemifino kuphathwa ngokugcinwa komoya, okusiza ukuthuthukisa umphumela wokugcina futhi kunwebe isikhathi sazo seshalofu, futhi kuhlangatshezwane nazo zonke izindinganiso zokungangcolisi zokulondoloza okuluhlaza.
18. Ukugcinwa kokudla
Ekugcinweni kokusanhlamvu, i-nitrogen yethulwa ukuvimbela ukubola ngomsebenzi we-microbial kanye nezinambuzane noma ukuphefumula kokusanhlamvu ngokwayo.I-Nitrogen ayikwazi nje ukunciphisa okuqukethwe kwe-oksijeni emoyeni, ibhubhise imisebenzi ye-physiological ye-microorganisms, ukusinda kwezinambuzane, kodwa futhi kuvimbela ukuphefumula kokudla ngokwako.
I-laser ukusika insimbi engagqwali nge-nitrogen, ingavimbela izingxenye zokushisela ezivezwe emoyeni nge-oksijini oxidation, kodwa futhi ukuvimbela ukubukeka kwama-pores ekushiseleni.
20. Ukuvikelwa kokushisela
I-nitrogen ingasetshenziswa ukuvikela izinsimbi ekufakweni kwe-oxidation lapho zishiselwa.
Vikela izinsalela zomlando
Emamyuziyamu, amakhasi okudweba ayigugu futhi angavamile nezincwadi ngokuvamile agcwele i-nitrogen, engabulala izibungu.Ukuze kuzuzwe ukuvikelwa kwezincwadi zasendulo.
Ukuvimbela umlilo kanye nokulwa nomlilo
I-nitrogen ayinawo umphumela osekela ukuvutha.Umjovo wenitrogen ofanele ungavimbela umlilo futhi ucime umlilo.
I-nitrogen ingasetshenziswa ekuhlinzeni, e-cryotherapy, efrijini yegazi, ekuqandeni kwezidakamizwa kanye ne-cryocomminution, isibonelo, njengesiqandisi sokukhishwa kwama-plaque ezibhedlela, kuhlanganise nokuhlinzwa.
Ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe kanye nokuthuthukiswa kokwakhiwa komnotho, i-nitrogen iye yasetshenziswa kabanzi emabhizinisini amaningi ezimboni kanye nokuphila kwansuku zonke.Ngokuvuthwa komshini wokucindezela i-adsorption nitrogen machine, umshini we-nitrogen on-site ukukhiqizwa kwe-nitrogen kunomunye ukunikezwa kwe-nitrogen ngaphezulu. kwezomnotho, kuwusizo kakhudlwana.